Dhammaan macluumaadka ku saabsan AirTag, aaladda sheyga Apple | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | Noticias, Alaabada Apple
Muhiimaddii shalay waxay muujineysay bilowga cutubyo cusub taariikhda Apple. Kuwa kale oo badan oo muddo dheer furnaa iyaguna waa la xiray. Mid ka mid ah ayaa ah si rasmi ah u soo saarista Apple AirTags, Tusaha Big Apple Item oo aan wadanay muddo sanad ka badan. Ugu dambeyntiina, waxaan horeyba u ognahay dhammaan wararka ku saabsan badeecadan yar ee noo oggolaan doonta inaan sii wadno wax walba oo aan dooneyno inaan isticmaalno shabakadda nidaamka deegaanka iyo qalabka Apple. Hoos waxaan ku falanqeyneynaa dhammaan astaamaha qalabkan yar ee ujeedkiisu yahay inuu guuleysto.
1 Sir qarsoon ayaa markii ugu dambaysay shaaca laga qaaday: sifooyinka
2 AirTags waxay la jaan qaadayaan shabakada Raadinta ee Apple
3 Tijaabinta biyaha aaladaha: muhiimada ay leedahay U1 chip
4 Qiimaha Apple AirTag iyo helitaankiisa
Sir qarsoon ayaa markii ugu dambaysay shaaca laga qaaday: sifooyinka
Qalabka 'AirTag' waxaad si fudud ku ogaan kartaa meesha ay waxyaabahaagu yaalliin. Mid dhig furayaasha midna boorsada dhabarka waxaadna kaheleysaa goobta Raadinta, isla kan aad u adeegsato inaad ku hesho saaxiibadaa iyo aaladahaaga Apple. Waa raadin, ha moogaanin.
Markaan nidhaahno waxay ahayd sir codad leh Waxay ahayd in wararka xanta ah ay noolaayeen ilaa iyo Maarso 2020 markii aan dhexda uga jirnay cudurka faafa ee COVID-19. Waxaa sidoo kale laga filaayay nuxurkii ugu dambeeyay ee sanadkii hore iyo sababo aanan wali ogayn, Apple waxay ka laabatay soo saarista badeecadan yar qorshaha. Ugu dambeyntiina, iyo sugitaan dheer ka dib, horay ayaan ula joognay AirTags-ka.
Qalabkan yar ee aan aad uga weyneyn lacagta lacagta ee 2 euro ayaa lagu wadaa inuu noqdo helitaanka shey ama walxo kasta oo aan qiyaasi karno. Xaqiiqdii, waxay ku xiran tahay soo saarayaasha inay horumariyaan agabyada ama walxaha meesha ay ku dhejinayaan AirTag si ay u helaan. Cabbirkeeda yar iyo kala duwanaanshaheeda ayaa u oggolaaneysa in lagu meeleeyo tiro aad u tiro badan oo leh hal ujeedo cad: goobta waqtiga dhabta ah.
Apple AirTags waxay wataan baytari heer sare ah oo ay sheeganayaan inuu soconayo in ka badan sanad iyadoo la adeegsanayo afar dhawaaq iyo hal baaris sax ah maalintii. Xogtaan iyadoo la adeegsanayo barnaamijka beta iyo aaladaha hadda socda. Waxay u badan tahay in batteriga lagu sii hagaajin karo mustaqbalka cusbooneysiinta soo socota ee nidaamyada Apple.
Intaa waxaa dheer, qalabka Waxay leedahay IP67 caabbinta biyaha iyo caabbinta boodhka. Waxay la midoobaysaa, dhinaca kale, cod-baahiye u oggolaanaya soo-saarista codadka si ay uga caawiso adeegsadaha inuu u helo si fudud oo maqal ah. Qaybta dambe waa la kala qaybin karaa si loo beddelo batariga caadiga ah ee uu isku daro sidaan hore uga faallaynay.
AirTags waxay la jaan qaadayaan shabakada Raadinta ee Apple
AirTags waxaa loo qaabeeyey iyadoo la isticmaalayo qalab macruufka ah ama iPadOS waana noqon kartaa ku rakib cunsur gaar ah. Taasi waa, waxaan siin karnaa mid kasta oo ka mid ah qalabyadan yaryar magac shaqsiyeed. Tusaale ahaan: 'Furayaasha Angel' ama 'Furayaasha Gawaarida'. Sidan oo kale, Siri ayaa naga caawin karta inaan helno mid kasta oo ka mid ah walxahan iyada oo aan loo baahnayn in la galo arjiga Raadinta.
Ma lumisay boorsada jeebka? Adduunku ma dhammaanaayo. AirTag kasta wuxuu leeyahay sameecado la dhisay oo waxaad ka dhigi kartaa wicitaan si aad u hesho. Kaliya furo tabka Waxyaabaha cusub ee abka Raadi ama dhaho "Hey Siri, meeye boorsadeyda?" Haddii ay u dhowdahay, sida fadhiga hoostiisa, ama qolka ku xiga, waa inaad la socotaa codka.
Mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan AirTags waa awood u yeelan karto inaad dhexgasho nidaamka raadinta iyo abka. Waa wax ay Apple horeyba nooga filaysay iOS 14.5 iyo wax ka beddelka barnaamijka Buscar in lagu daro alaabooyin kale oo iswaafaqsan shabakada. Waxay u shaqeysaa qaab fudud: Dhammaan aaladaha la jaan qaada shabakadda Raadinta (iPad, iPod Touch, Mac, iPhone, iwm) waxay soo saaraan shabakad awood u leh inay xogta ku dirto iyada oo loo marayo Bluetooth iyo halkaas oo ay ugu socoto iCloud Sidan oo kale, AirTag ah oo aan uga tagnay xeebta waxay calaamado u diri kartaa iPhone-yada u dhow iyo kuwa iPhone-ka ah waxay macluumaadka u diraan iCloud oo halkaas ayay uga diraan iPhone-kaaga iyadoo ujeedadu tahay si aad uhesho shey lumay adoo adeegsanaya shabakada weyn ee aaladaha Apple oo ku baahsan aduunka oo dhan.
Laga soo bilaabo Cupertino waxay xaqiijinayaan taas xiriirkan waxaa lagu sameeyaa qaab sir ah ilaalinta asturnaanta dhammaan waxyaabaha. Dhammaan xogta waa qarsoodi oo waa la xareeyay. Maxaa intaa ka badan, hawshu waa mid tayo sare leh si aaladuhu aysan u isticmaalin batteriga ama u cunin xog dheeri ah oo u oggolaaneysa isbeddel ku yimaadda adeegsadaha.
Tijaabinta biyaha aaladaha: muhiimada ay leedahay U1 chip
El U1 jab waxay markii ugu horaysay ka soo muuqatay iPhone 11 iyo 11 Pro. Waa qalab aad u ballaadhan oo ballaadhan (Ultra Wide Band) oo u oggolaanaya ogaanshaha goobta. Waad ku mahadsan tahay mashiinka masaafada gaaban wuxuu u ogolaanayaa goobta saxda saxda ah mahadsanid tiknoolajiyada ku saleysan daahitaanka dirista, soo dhaweynta iyo awooda calaamadaha la diro.
Tan iyo markaas, IPhone 12 iyo Apple Watch kii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale isku daray qalabkan U1. Waana furaha AirTags iyo shabakadda Apple Search. Sababta Sababtoo ah AirTag kasta wuxuu leeyahay guntin U1 ah gudaha taas oo u oggolaaneysa isdhexgalka iPhone 11 iyo 12 (dhammaan noocyadeeda) is dhaafsiga macluumaadka u oggolow goobta saxda ah ee qalabka. Intaa waxaa dheer, Apple ayaa isku dhafan Raadin Toosan, nidaam u oggolaanaya kaamirada, xawaaraha, gyroscope iyo xirmada ARKit in la mideeyo si looga caawiyo isticmaaleha inuu si dhakhso leh uga helo AirTag codadka, dareenka xasaasiga ah iyo aragtida aragtida.
Bixi a nidaamka deegaanka ee qalabka uu kujiro 'U1 chip' waxay muhiim u tahay qorshaha geynta AirTag ee ugu habboon. Aalado badan ayaa jira, iyo inbadan oo U1 ah oo ku jira shabakada lafteeda, ayaa ka waxtar badan marka ay timaado helitaanka qalabkan yar yar ee juqraafi ahaan.
Qiimaha Apple AirTag iyo helitaankiisa
Si aad u awoodo inaad isticmaasho AirTags waa lagama maarmaan inaad haysato mid ka mid ah aaladaha soo socda macruufka ama iPadOSOS 14.5, Sidaa darteed, qorshaha oo dhan ee ay Apple rabto inay ku daadiso iyadoo la bilaabayo cusbooneysiintan weyn ayaa la xaqiijiyay:
iPhone 6s ama wixii ka dambeeya
iPod taabashada (jiilka 7aad)
iPad (jiilka 5aad ama dambe), Hawada 2 ama ka dib, mini 4 ama ka dib
The AirTags Boos celinta waxaa laga bilaabi karaa 14:00 pm duhurnimo Jimcaha, Abriil 23 at Apple Store Online. Waxaa jira laba qaab oo loo iibsado badeecadan yar:
Dufcaddii AirTag: 35 euros
Wax badan oo 4 AirTag ah: 119 euros
Mid kasta oo ka mid ah AirTag-yada aan iibsanno emoji qaas ah ama xarfaha xarfaha waa lagu dari karaa sida alaabada kale ee Apple. Intaa waxaa dheer, Apple wuxuu leeyahay nooca gaarka ah Hermes, wadashaqeyn la leh astaanta moodada Faransiiska:
Calaamadaha shandadaha + AirTag: 449 euro
Keychain + AirTag: 349 euros
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Dhammaan macluumaadka ku saabsan AirTags, qalabka wax lagu ogaado ee Apple
Apple waxay si rasmi ah u sii deyneysaa iOS 14.5 usbuuca soo socda